Baaq loo diray Ahlusunna waljamaaca – Radio Muqdisho
Baaq loo diray Ahlusunna waljamaaca
Ururada Haweenka Gobollada Banaadir iyo Shabeellaha Dhexe ayaa Baaq u diray Maamulka Culimada Ahlusunna waljamaaca kaas oo ku aadan in dib xuriyadooda loo siiyo wariyaasha wali u xiran Maamulkas.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka shabellaha dhexe Sacdiyo Maxamed Nuur oo la hadashay Radio Muqdisho Codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa Sheegtay in ay ahayd Ahlusunna inay ka fiirsato kahor inta aysan xarig ama Hanjabaad ugaysan wariyaasha, iyadoo si shuruud la,aan ah ugu baaqday Maamulka Ahlusunna inay ku Siidaayaan wariyaasha Maalintii labaad gacanta ugu jira.
“ wa inay sii daayaan wariyaasha Ahlusunna waqti lays mucaarado ama lays faquuqo lagu ma jiro, Umadda Soomaliyeed waxaan leeyahay Aan iskaashanno “ Ayey tiri Guddoomiye Sacdiyo Maxamed Nuur.
Guddoomiyaha Ururka haweenka Gobolka banaadir jabaahir Baarqab ayaa iyana farriin baaq ah u dirtay Ahlusunna waljamaaca kaas oo ku Aadan in dib xoriyaddooda loo siiyo wariyaasha u xiran maamulka culimada Ahlusunna kuwaas oo ay ku haystaan inay ku qasbaan awamiir ay iyagu soo saareen dhawaan jawaahir ayaa tiri
“ waxaan ka Codsanaynaa Ahlusunna in ay soo daayaan wariyaasha Xiran, Wixii Siyaasad ah Bannaanka ayay ka yihiin Wariyaasha, Saxafigu Xushmad Buu Rabaa Waa midka isku xira dalka iyo dibadda, Saxafigu waxa uu u baahan yahay Naxariis, Wuxuu ku shaqeeyaa Duruufo adag” Ayey Sheegtay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir jawaahir Baarqab.
Muddo labo Maalin ah ayey si xushmad darro ah ugu xiran yihiin Maamulka Ahlusunna waljamaaca Wariyaal gaaraya 5 wariye oo si qasab ah maamulkaas uu doonayo inuu uga dhaadhiciyo Fikradda ay Ahlusunna doonayso inay ku shaqayso ama jeceshahay taas oo ka madax bannan Xoriyadda hadalka.
Haweenka oo isku Diyaarinaya Hiigsiga Cusub ee Sanadka 2016’ka
Wasiirka warfafinta” maaha in sida xoolo meel lagu soo xirto qof gudanaya waajibkiisa Shaqo”
Wasiirka warfafinta" maaha in sida xoolo meel lagu soo xirto qof gudanaya waajibkiisa Shaqo"